Inqubomgomo Yobumfihlo, OffshoreCompany.com
Ubumfihlo bakho kubalulekile kithi. Sigxila kakhulu ekugcineni imininingwane yakho iyimfihlo.
Ngokufaka noma ukusebenzisa iwebhusayithi ye-OffshoreCompany.com, uvumela inqubomgomo yobumfihlo ye-OffshoreCompany.com njengoba ichaziwe ngezansi.
Usuku lokugcina Olushintshiwe: I-20th Meyi 2018
Ubumfihlo bakho bubalulekile.
Imininingwane yomuntu eqoqwayo, uma uyihlinzeka, izosetshenziselwa ukuxhumana nawe, ikuthumele imininingwane eminingi ngemikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo, inikeze ukufezekiswa kwensiza futhi inikeze eminye imininingwane uma ucela.
Uma usinikeza imininingwane yakho ngalezi zinhloso, uyavuma ukuqoqwa kwethu kanye nokusebenza.
Asabelani ngemininingwane yakho nabangaphandle
Ngokuvakashela iwebhusayithi yethu, ukuhambisa amafomu online ukuthola eminye imininingwane noma ukuthenga insizakalo, ngokunikeza imininingwane yakho yokuxhumana nge-imeyili, uyavuma ukuqoqwa kanye nokucutshungulwa kwemininingwane yakho ehlonishwayo, i-PII, njengoba kuchazwe lapha.
Isilawuli sedatha ejwayelekile yokuvikela idatha (GDPR) yi-General Corporate Services, Inc.
Imininingwane Onganikeza Ngayo Kuncike ku-GDPR
Imininingwane yomuntu akhona ongayinikeza iwukuba u-oda insiza, ucele ulwazi oluthe xaxa futhi uthole izibuyekezo zomthetho ezibalulekile ngokuthumela ifomu eliku-inthanethi ku-w :offshorecompany.com.com (le webhusayithi), ngokusithumela nge-imeyili, ngocingo, ngeposi leposi noma ngenye indlela xhumana nathi.
Imininingwane Engaziwa Yimfihlo oyinikezayo yigama lakho nemininingwane yokuxhumana, izidingo zedokhumenti yomthetho yezinsizakalo ezi-odiwe, imininingwane yokukhokha yama-oda wensizakalo, imininingwane yokuthumela yokulethwa kwama-oda nazo zonke izinkambu ezidingekayo ukuze ugcwalise futhi ufake namadokhumenti wefayela, njengokuthi; imininingwane entsha yenkampani, imininingwane entsha ye-trust nezinye izidingo zedokhumenti yomthetho ehlobene.
Ukuphepha Kwedatha Yakho
Sizibophezele ekuthobeleni i-GDPR (i-athikili 5)
Imininingwane yomuntu uqobo izoba:
kusetshenzwe ngokomthetho, ngobuhlakani nangendlela esobala maqondana nesihloko sedatha ('umthetho, ukulunga nokungabi sobala');
eqoqelwe izinhloso ezicacisiwe, ezicacile nezisemthethweni futhi ezingaphinde ziqhutshwe ngendlela engahambisani nalezo zinhloso; ukucubungula okuqhubekayo ngezinjongo zokugcina umlando ngentshisekelo yomphakathi, izinhloso zocwaningo lwesayensi noma zomlando noma izinhloso zezibalo, ngokuya nge-Article 89 (1), ngeke kuthathwe njengokungahambisani nezinhloso zokuqala ('umkhawulo wenhloso');
kwanele, kufanelekile futhi kukhawulelwe kulokho okudingekayo maqondana nezinhloso ezenzelwe zona ('ukuncishiswa kwedatha');
kunembile futhi, lapho kunesidingo, kugcinwa kusesimweni; zonke izinyathelo ezifanele kufanele zithathwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi idatha yomuntu siqu engalungile, ngokubheka izinhloso ezenzelwe zona, ziyacishwa noma zilungiswe ngaphandle kokulibala ('ukunemba');
kugcinwe kwifomu elivumela ukukhonjwa kwezihloko zedatha isikhathi eside kunesidingekile ngezinhloso lapho imininingwane yomuntu uqobo icutshungulwa; imininingwane yomuntu siqu ingagcinwa isikhathi eside ngokungafani njengoba imininingwane yomuntu uqobo izocubungulwa kuphela ngezinjongo zokugcina umlando ngentshisekelo yomphakathi, izinhloso zocwaningo lwesayensi noma zomlando noma izinhloso zezibalo ngokuhambisana ne-Article 89 (1) kuncike ekuqalisweni kobuchwepheshe obuhle nenhlangano izinyathelo ezidingekayo zalo Mthethonqubo ukuze kuvikeleke amalungelo nenkululeko yesihloko sedatha ('umkhawulo wesitoreji');
kusetshenzwe ngendlela eqinisekisa ukuphepha okufanele kwemininingwane yomuntu, kufaka phakathi ukuvikelwa ekusetshenzisweni okungagunyaziwe noma okungekho emthethweni kanye nokulahleka kwengozi, ukubhujiswa noma ukulimala, kusetshenziswa izindlela ezifanele zobuchwepheshe noma zenhlangano ('ubuqotho nokugcina imfihlo').
Sisebenzisa izinhlelo zamanje zolwazi lwebhizinisi ukugcina imininingwane yamakhasimende ixhaswa ngokuphepha kwedijithali yanamuhla kanye nomphathi wohlelo ozinikele. Inhlangano yethu ine “DPO” Isikhulu Sokuvikelwa Kwemininingwane esingafinyelelwa kusetshenziswa i- ikhasi lokuxhumana yale webhusayithi.
Sisebenzisa abahlinzeki beqembu lesithathu ukusingathwa kwewebhusayithi yethu futhi sinikeze ukuxhumana, ukuthumela, invoising / accounting nokucubungula izinkokhelo.
Sisebenzisa izindlela ezijwayelekile zomkhakha, izindlela ezinhle kakhulu nokubethela lapho kungenzeka khona lapho sithola, sisebenzisa futhi sigcina imininingwane yakho.
Ngokuhlinzeka ngemininingwane yomuntu, uyavumelana nalokhu.
Imininingwane esiyiqoqayo lapho sivakashela iwebhusayithi yethu:
ikheli lakho le-IP, isiphequluli, uhlelo olusebenzayo kanye nohlobo lwekhompyuter olunezandiso, ama-plugins nolunye ulwazi ledivayisi
ufike kanjani kuwebhusayithi yethu, usuku nesikhathi uvakashela iwebhusayithi yethu futhi nokuqukethwe okubukayo, indawo ekubhekiswa kuyo kanye nolwazi lwenjini.
Ukwabelana ngeDatha Yakho
Sizoveza imininingwane yakho kuphela ngemvume yakho noma ukuthobela imithetho ebusayo noma imiyalo yenkantolo.
Uma ufaka ifomu lokuxhumana kwiwebhusayithi yethu, izinkambu ozihambisayo zithunyelwa kwinsizakalo ye-CRM yebhizinisi lezinhlelo ze-CRM kanye nesehlakalo sokuphatha i-imeyiliChannelChimp. Lawa ma-processor wedatha ahambisana nomuntu we-GDPR.
Uma uthumela i-imeyili, ushayela ucingo noma ungasithinta, singaphendula nge-imeyili - amaseva ethu ahlinzekwa nguGoDaddy futhi sisebenzisa isoftware ye-imeyili ye-Microsoft Outlook. I-GoDaddy ne-Microsoft zi-processor yedatha ehambisana ne-GDPR.
Zonke izinqubo zedatha yesithathu esizisebenzisayo ziyahambisana neGDPR
I-Google - Umhlinzeki We-imeyili newebhusayithi Ukuhlaziywa kwewebhusayithi
I-Microsoft - Umhlinzeki weseva ye-imeyili
ImeyiliChimp - Umhlinzeki Wezokumaketha nge-imeyili
I-SalesForce - Umhlinzeki we-CRM
I-GoDaddy - Umhlinzeki WeWebhu noMhlinzeki We-Hardware
IGoogleDrive - Idokhumenti Yedokhumenti / Isixazululo Sokulondolozwa
Facebook - Umhlinzeki Wenkonzo Yezentengiso
Ama-QuickBooks - Isoftware ye-Accounting
I-Akhawunti Yomthengisi - Iprosesa Yokukhokha
Sizovele sidalule imininingwane yakho ngokuya ngomthetho noma ukutholwa kwenkampani / ukuhlanganisa.
Sisebenzisa kanjani idatha yakho
Imininingwane enikezwe nguwe isetshenziswa ukwanelisa izidingo kunoma yiziphi izicelo zemininingwane noma zamasevisi, izibuyekezo zemithetho efanele yomhlaba wonke, ukukhuphula kanye nezincomo.
Ulwazi esiqoqayo lisetshenziselwa ukutadisha umsebenzi wethu wewebhusayithi nokuthuthukisa okuqukethwe nokuhlangenwe nakho komsebenzisi, ukuqapha izindleko zokukhangisa kanye nemizamo kanye nezinjongo ezibhekiswe ezithakazelweni.
Ulwazi lwe-third party party ingahlanganiswa nolwazi olunikezile noma oluqoqwe, oluzosetshenziswa ngokuhambisana nale nqubomgomo yobumfihlo.
Amalungelo akho ngaphansi kwe-GPDR
Ilungelo lokwaziswa - Ilungelo lokubuza ukuthi iyiphi idatha yomuntu siqu nokuthi iyasetshenziswa kanjani.
Ilungelo Lokufinyelela - Ilungelo lokubuka idatha yakho yomuntu siqu.
Ilungelo Lokulungiswa - Ilungelo lokulungisa nokuguqula uma lingalulwanga.
Ilungelo lokuhoxisa imvume - Ilungelo lokususa imvume yokuqoqa nokucubungula ulwazi lomuntu siqu.
Ilungelo Lokungavumeli - Ilungelo lokuphikisana kwedatha yakho yomuntu kusetshenzwa.
Ilungelo lokuphikisana nokucubungula okuzenzakalelayo - Ilungelo lokuphikisana nesinqumo esenziwe ngokucubungula okuzenzakalelayo.
Ilungelo lokukhohlwa - Ilungelo lokucela idatha yakho ukuthi isuswe.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha - Ilungelo lokucela ukudluliswa kwedatha yakho - idatha kufanele inikezwe noma idluliselwe kumfomethi efundekayo ngomshini.
Sizogcina isikhathi esingakanani idatha yakho?
Sizogcina imininingwane yamakhasimende isikhathi eside uma kudingekile ukufeza umyalelo wensizakalo futhi sikwenze izicelo futhi zihambisane nezidingo zomthetho.
Xhumana nathi mayelana nokususa idatha yakho.
Ukudalulwa kwabamancane ngaphansi kweminyaka engu-16
Imvume yomzali iyadingeka ngaphambi kokusinika ngolwazi lwakho lomuntu siqu.
Buyisa imvume yakho
Xhumana nehhovisi lethu futhi ucacise lokhu kuyisicelo sokususa imvume ekuqoqweni nasekusetshenzisweni kolwazi lwakho lomuntu siqu.
Isicelo sokufinyelela kwesihloko (SAR)
ungacela ukuthi sikuthumele imininingwane mayelana nanoma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esinalo, noma
ungacela ukuthi silungise noma yikuphi ukungahambisani, noma
ungacela ukuthi ususe yonke idatha yakho.
Ngokuhambisana ne-GDPR, zonke izicelo zokufinyelela zinikezwa mahhala ezinsukwini ezingu- .
Ngayiphi imibuzo ephathelene nedatha yakho, noma ukuhambisa izicelo, sicela uxhumane nathi:
I-General Corporate Services, Inc
I-Dallas TX 75206-1906
Ucingo: + 1 (800) 959-8819
I-International: (661) 253-3303
Ifekisi: (661) 259-7727
Izinqubomgomo zenkampani yesithathu
Sinezinkambiso zomgomo wethu wobumfihlo kuphela.
Singase sixhumanise namanye amawebhusayithi. Kubalulekile ukuhlola inqubomgomo yabo yobumfihlo futhi uqinisekise ukuthi amanye amawebhusayithi ahambisana ne-GDPR ngaphambi kokuthumela ulwazi lomuntu siqu.
Asawamukeli noma yikuphi umthwalo wemfanelo noma umthwalo wokuphatha ubumfihlo kwabangaphandle.
Ama-cookies asetshenziswa ngemvume yakho, amafayela amancane kukhompuyutha yakho akukhomba kuwebhusayithi yethu.
Izinhlobo zama-cookies esiwasebenzisayo
I-Analytics Yewebhusayithi: inikeza izinombolo zezivakashi, ukuthengwa kwemigwaqo kanye nokuziphatha kokuqukethwe ukuze kuthuthukiswe ukukhangisa kwethu nokuhlangenwe nakho komsebenzisi.
Ukukhangisa kokukhangisa: urekhoda izinyathelo ezithathwa kwiwebsite yethu njengokuqukethwe osicelile futhi uxhumanisa ngokuchofoza. Sisebenzisa lokhu ukuthuthukisa izinto nemilayezo kwiwebsite yethu kanye nezinto zokusebenza.
Amakhukhi we-third party angase abekwe kuwebhusayithi yethu afaka:
I-Google Analytics iqoqa idatha engeyona yomuntu mayelana nokusetshenziswa kwewebhu ngokusho kwenqubomgomo yabo yobumfihlo: www.google.com/policies/privacy/
Ikhukhi yokumaketha ye-Google inikeza indlela yokuhlunga okuqukethwe okunikezwe kuwe ngokusekelwe kumlando wakho wokuphequlula wewebhusayithi yethu. Ungakhetha ukuphuma kulezi zilungiselelo zakho ze-Google Ad.
I-SalesForce yisistimu yethu ye-CRM futhi amakhukhi asivumela ukuthi siphathe othintana namakhasimende mayelana nezicelo zolwazi kanye nemiyalo yesevisi.
I-Wordfence i-WordPress Security Option esebenzisa ikhukhi ukuze inqume ukuthi ungumuntu womsebenzisi.
I-Facebook Pixel inikeza ukuhlaziywa kwe-website ye-traffic ukukala ukusebenza komkhangiso.
Ungavimba amakhukhi ngokushintsha ukulungiselelwa kwesiphequluli sakho.
I-OffshoreCompany.com ibhizinisi lebhizinisi futhi aliyona inkampani yomthetho. Asihlinzeki ngezeluleko zomthetho noma zezezimali.
Uma unemibuzo, ukukhathazeka, noma ukuphawula mayelana nezinqubomgomo zobumfihlo noma imikhuba yethu, singathanda ukwazi ukuthi zingakanani ukuze sikwazi ukubhekana nazo. Sicela uxhumane nathi ku-1-800-959-8819.